Immisa shirkad ayaa laga qaadayaa? | Martech Zone
Immisa shirkad baa laga qaadaa?
Isniintii, September 22, 2008 Isniintii, September 22, 2008 Douglas Karr
Waxaa jira hal Wal-mart oo keliya. Wal-mart waa shirkad kaliya leh hal soo jeedin qiimo: qiimo jaban. Waxay la shaqeysaa Wal-mart maxaa yeelay waxay iibin karaan badeecada isku midka ah oo ka raqiisan tafaariiqda soo socota.
Ma tihid Wal-mart. Ma tagi kartid shaqada si aad u ogaatid sida qiimaha loo dhimo maalin kasta. Sidoo kale waa inaadan. Shirkaddaadu waa mid gaar ah oo waxay leedahay waxa shirkad kale aysan bixin karin.
Hadafkaaga suuq-geynta waa inuu noqdaa kala sooc naftaada ka mid ah tartanka. Ha tartamin! Soo ogow waxa adiga kaaga duwan iyo sida ay ugu habboon tahay baahidaada rajada. Waxaad ku siisaa rajadaada tixraacyo iyo koontooyinka qofka ugu horreeya ee sidaad ugu gudbisay macaamiishaada.
Waxaa jira saddex nooc oo shirkado ah:
Shirkadaha bixiya lacagta xad-dhaafka ah
Shirkadaha geeyo = lacag-bixinta
IMHO, kuwani waa oo keliya noocyada meheradaha. Shirkadaha keena ma awoodo lacag dheeraad ah, qiimaha aad bixisay waa qayb ka mid ah dirista. Labada erey waa isku mid.
Shirkadaha keena waxay qaadaan lacagta saxda ah ama ka hooseysa qiimaha ay bixiyaan. Intooda badani qarash buuran baa. Waxaad u badan tahay inaad ka mid tahay.
Waxaan arkay iibiyeyaal ay ku kaceen boqollaal kun oo doolar, laakiin u keenay kaliya qayb ka mid ah qiimahaas. Waxaan hayaa asxaabteyda oo si xad dhaaf ah wax u geeyay dheeraad ah qiime laakiin waxay la halgamayaan sidii ay u sii joogi lahaayeen
Adigu ma tihid Wal-mart, jooji qiimeynta naftaada sidan oo kale. Waad u qalantaa intaa ka badan.
Tags: adeolonohsaxafiga brandChandlerxamuulCroremobbasemuusikada gacantabarnaamijka moobilka muusikadamyasinneilbermanSpotifysheeko
Sep 26, 2008 at 4: 16 PM
Aamiin Doug! Runtii waan heshiin kari waayey wax badan. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax laga xumaado in bulsho ahaan aan aad ugu mashquulsanahay PRICE. Way adkeyneysaa in la muujiyo QIIMAHA dhabta ah! Dahaarka kaliya ee qalinka ah ayaa ah haddii aad si dhab ah wax ugu bixiso macaamiishaada (maxaa yeelay shirkado badan maahan) way qiimeyn doonaan adeeggaaga (waxaana rajeynayaa) inay kuwa kale u soo jeediyaan. Kala duwanaanshaha muhiimka ah ee u dhexeeya qiimaha iyo qiimaha ayaa runtii suuq geyn ah.
Sep 27, 2008 at 12: 22 PM
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in dadku ku mashquulsan yihiin qiimaha badanaa waxay u horseedaa inay qarashgareeyaan lacag aad u fara badan - gaar ahaan marka istiraatiijiyaddii ay bixiyeen ay fashilmaan oo ay tahay inay wax badan ku bixiyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen fashilka.
Boostada wanaagsan Doug iyo barta ku taal. Waxaan had iyo jeer raadinayaa inaan kala saaro tartamayaasheyda oo aan isku dayo inaan ku sameeyo siyaabo yar oo xiiso leh, iyo sidoo kale kuwa culus. Waxay umuuqataa mid shaqeynaya.
Waxaan udiyaar garoobay mashruuc dhowaan, waxaanan ku kalsoonahay 100% inaan sameyn doono shaqo kafiican, kafiican tan dadka kale ee dhismaha kujira Waxay u dhaadhacaysaa £££ iyo waliba haddii ay doonayaan “la taliye” ama hay’ad weyn.